Lahatsary nalain'i Dr. Plandemic Judy Mikovits dia karazana horonantsary hosoka vaovao (horonantsary): Martin Vrijland
Lahatsary nalain'i Dr. Plandemic Judy Mikovits dia karazana horonantsary hosoka vaovao (horonantsary)
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 11 May 2020	• 30 Comments
Tsy maintsy efa nahita azy ianao, ny fakana sary fanadihadiana momba ny vehivavy iray atao hoe Dr. Judy Mikovits no miantso. Voalaza fa efa nigadra nandritra ny andro maromaro izy ary nosamborina tsy nisy fitsarana. Aorian'ny famotsorana azy dia tonga amin'ny karazana fanambaràna rehetra momba ny otrikaretina sy ny patina vaksiny izay nataon'i Dr. Fauci dia voalaza fa efa zatra manao heloka bevava amin'ny maha-olombelona.
Iza moa izy Event 201 avy amin'ny Johns Hopkins Institute, fantaro fa ny ady amin'ny vaovao sandoka dia ampahany manan-danja amin'izany simba pandezana amin'ny coronavirus io. Voahitsoka izahay.
Ny fomba tsara indrindra hamonoana ny mpanohitra dia ny famelabelarana tantara diso izay toa malemy sy azo itokisana satria ny mpilalao sarimihetsika mpitarika dia tonga fotsiny amin'ny tantara "tsara feo". Fa mandritra izany fotoana izany dia ampidirina i Forbes ity lahatsoratra midadasika ity Mikovits dia mpikatroka miady amin'ny vaksiny. Mety ho marina izany, saingy mety ho io ihany koa dia ao amin'ny karaman'i Bill Gates ity ramatoa ity mba hanao izay zavatra noresahiko imbetsaka teto: milalao opérasionina (fihetsika).
Raha ny fifehezana ny fanaraha-maso, ny baomba dia aorina hatrany amin'ny vodiny roa sosona. Reko ankehitriny fa mieritreritra ianao hoe:Ah, Vrijland, ajanony ny tsy fetezan'ny mpanohitra mifehy anao!“Tena malahelo aho, nefa efa nahita porofo mivaingana ve ianao - ankoatry ny fahatsapana ho sosotra? Tsia? Tokony hampahatahotra anao izany. Tokony ahagaga anao ihany koa ianao satria efa nahazo ny fampitam-baovao sy ny media sosialy be ilay ramatoa.
Ho an'ny rehetra, ny haino aman-jery hafa no mampiroborobo azy io ary afaka mahita ilay horonan-tsary mizara am-pahazotoana ao amin'ny Facebook sy media sosialy hafa ihany koa ianao. "Eny, inona ny tsy mety?"Tsy misy maharatsy an'izany, raha tsy efa nampitandrina imbetsaka momba ny fisian'ny iray aho tafika media sosialy lehibe. Ary raha afaka manampy anao ny tafika izany dia ho faly izy ireo. Raha toa ka manaraka ny fiparitaky ny paositra voafehy ary voaporofo ho azy ianao dia afaka mitifitra anao izy ireo.
Ny ampahany amin'ny simulation ny hetsika 201 dia ny hoe tsy maintsy natambatra ny vaovao sandoka. Ahoana no ahafahanao mandamina tsara an'io? Amin'ny alàlan'ny famoahana ireo vaovao sandoka sy fanaraha-maso ny fizarana azy (Big Data) ary mandinika tsara ny fiantraikany ary mahita hoe iza no tsy mandray na tsia. Ny rafitra Big Data dia afaka mandrefy ny valin-teninao ary manara-maso ny fiantraikany ara-tsosialy miankina amin'ny antsonao sy ny fanaraha-maso sensor avy amin'ny telefaona (automated via AI script.
Hitantsika indray ny paikady fiarovana momba ny fiarovana, izay ny mpitsikera marobe araka izay azo atao dia voatazona ao anaty fandrika, ka tsy ho ela dia hanao hoe "Tsy mino intsony aho - raha tsy avy amin'ny haino aman-jery mahazatra".
Lisitry ny rohy loharano: forbes.com
Ny harato fandosirana QAnon: PsyOp malemy saina hanamarinana ireo mpandinika mahay
Famerenana: 5G sy corona fa tsy misy ifandraisany!
Tags: 201, tsara indrindra, Fehezo tsara, Dr., hetsika, hosoka, Fauci, Featured, Fehezo tsara, Judy, Mikovits, vaovao diso, vaovao, mpanohitra, mpanohitra, Plandemic, ny, Video, fomba
11 May 2020 amin'ny 15: 20
Inona no atao hoe 'mikovits' CV? Tena Mikovits ve izy?
Avy eo fantatro ho an'ny tenako manokana. Eo foana izy ireo, mahatsiravina!
11 May 2020 amin'ny 17: 45
idd mikowitz, kaufman… aza avela hiteny be loatra aho
11 May 2020 amin'ny 18: 15
11 May 2020 amin'ny 15: 26
Endrika maloto nefa marani-tsaina. Indray mandeha aho dia nanantena fa ny Q (sy Trump) dia hanongana ny fanjakana lalina. Satria nanambara izany ho fahamarinana aho, saingy ny hoe tsy ela dia nivadika aho, dia latsaka tanteraka tao anatin'ny fandrika aho ary midika izany fa ny zavatra rehetra lazaiko ankehitriny dia maneso tanteraka. Noho izany dia tena ilaina ny manondro olona izay mifoha any amin'ny sehatry ny fitrandrahana fanitsiana.
Mino aho fa azo itokisana i Andrew Kaufman, manantena aho fa tsy diso intsony aho…
(Ny anatina ny covid)
11 May 2020 amin'ny 17: 11
Miala tsiny, fa ny rehetra mila fantatrao momba ny fanovana générale an-tserasera dia nohazavaina tamim-pahombiazana tamina lahatsoratra maromaro teto amin'ny tranokala, ka tsy mila ampitainao amin'ny fantsom-pifandraisana hafa fotsiny ny mpamaky. Tsy hainao raha mifangaro amin'ny disinfo ireo fampahalalana ireo.
Izay rehetra tokony ho fantatrao:
11 May 2020 amin'ny 17: 25
Nanazava i Andy Kaufman ao amin'ny rohy faha-2 fa ny otrikaretina dia tsy mitovy amin'ny pathogens ivelany mahazatra. Ny teolojia vs terrain. Mbola tsy nitoka-monina mihitsy ny virosy, na io otrikaretina io aza, ka tsy marina ny fitsapana, sns. Na dia manazava ny zava-drehetra momba ny vaksiny ny rohy mankany amin'ny teknolojia fanovana ny CRISPR, mikasika ny tena viruses, dia mahita ny fampahalalana momba izany aho. Kaufman dia misy ifandraisany. Raha tsy hoe mpandraharaha disinfo ihany koa izy, saingy tsy heveriko fa izy.
11 May 2020 amin'ny 17: 48
Eny ary tsara, dia hianatra izany aho
11 May 2020 amin'ny 19: 34
Heveriko fa vonona tsy ho ela ianao, indrisy Tafiditra ao anatin'ny tafatafa naharitra 2 ora tany London. Toa diso ahy koa izany. Mijanona ho manelingelina tanteraka. Satria tena maharesy lahatra tokoa izy.
11 May 2020 amin'ny 23: 06
Ny làlan'ny fanahin'ny Björn Eybl dia marary noho ny lalàna biolojika momba ny natiora nataon'i Dr Hamer izay nampianarin'i Biologika Nederland. Ny boky dia milaza izao manaraka izao momba ny otrikaretina, gripa sy ny aretim-pisefoana (ny ankamaroan'ny soritr'aretina mampidi-doza amin'ny fiainana araka ny fanafody mahazatra).
Hatramin'izao dia tsy nisy otrikaretina hita. Ny otrikaretina dia tsy hita mivantana amin'ny fatoran'ny proteinina na tsy fehezin'ny proteinina hafa. Tsy misy porofo miavaka fa ny virosy dia voalaza fa miteraka aretina. Tsy isalasalana fa betsaka ny sérine proteinina (globulin) dia hita ao amin'ny ra sy ny tsiranoka hafa amin'ny vatana. Ireo globuline ireo dia toy ny antsoina hoe 'virus'. Mety miasa miaraka amin'ireo proteinina ireo ny serebrum mba hanamboarana ny taolana ectodermal simba amin'ny dingana fanasitranana.
Amin'ny fanafody tsy tapaka dia misy fanavahana eo amin'ny 'mampidi-doza, tena gripa' ary ny 'flu tsy mampidi-doza'. Ny syndromes masiaka dia raisina ho 'tena flu', ny dingana maivana kokoa dia esorina ho toy ny 'fihenan'ny gripa' na 'hatsiaka'. Avy amin'ny fomba fijerin'ny lalànan'ny natiora, isika dia mihevitra ny soritr'aretina marary:
Fanaintainan'ny reraka = fifandanjan-tena, fizaran-jaza
Ny hatsiaka mahazatra = ny fofona na ny fofona, ny dingana fanasitranana
Matevina matevina = tsy te hitelina na mitsoka zavatra, fanasitranana dingana
Larynx = mampatahotra na tsy fitenenana fitenenana, dingana fanasitranana
Avian, kisoa ary gripa vaovao dia 'fampielezan-kevitry ny OMS'.
Amin'ny 'areti-mifindra mahery', toy ny areti-mifindra, ny fanafody mahazatra dia mampiasa fitsaboana toa an'i Tamiflu na Relenza (sela fanakanana ny fihenan'ny sela), ny vaksiny ary koa ny hypnosis faobe.
Fifandroritana: Fifanorenan'ny ahiahy ao amin'ny faritany (lehilahy mavitrika, manafika) na Fifampihorohoroana matahotra (fifandonan'ny vehivavy, fanesorana). Miankina amin'ny dexterity, ny haavon'ny hormone ary ny fifandirana teo aloha. Ny olona matahotra ny ho very ny faritany (ohatra mpiara-miasa na asa) na toerana ao amin'ny faritany (ohatra ny toerany na laharana).
Tissue: Brônchial sy rivotra mucosa, plate epithelium, ectoderm
Fifanandrifian-javatra mavitrika: miharatsy ny sela amin'ny fitrandrahana bronchiale ary trachea, matetika tsy voamarika.
Fahalalana ara-biolojika: Ny faritany miakatra dia mampitombo ny halavam-potoana. Vokatr'izany dia misy rivotra tsara kokoa sy misimisy kokoa azo afenina sy voaro amin'ny fiarovana tsara ny faritany.
(Ao amin'ny biby dia mitombina ny fampifanarahana biolojika. Amin'ny olombelona matetika dia tsy noho ny fifamalianay dia matetika ara-tsaina ary noho izany ny fanitsiana biolojika dia tsy misy dikany. Na izany aza, ny fihetsiky ny vatantsika dia tsy mahalala ny tsy fitovian-kevitra ara-biolojika sy ara-tsaina. )
Fomba fanasitranana: fanarenana ny moka bronchiale miaraka amin'ny famafana izay mahatonga ny fahatsentsenan'ny tratrany dia mety hiaraka amin'ny kohaka sy ny tazo.
Ny fifanoherana etsy ambony dia mety hiteraka valin'ny vaovao sy ny fepetra. Amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fepetra dia afaka mamaha ny fifanolanana ary afaka marary ny olona.
Saika ny aretina rehetra dia mipoitra avy any anaty ka hatrany amin'ny fifandirana ara-tsaina izay miteraka fanitsiana biolojika amin'ny vatana (mitombo na mihena ny sela na fihenan'ny asa). Ireo fanitsiana ireo dia amboarina miaraka amin'ny micro-organisme (ny holatra sy ny bakteria fako dia manimba ny sela, ny bakteria ary ny 'viruses' manangana sela) izay novokarin'ny vatantsika. Ireto avy no: fanapoizinana (ohatra ny fanapoizinana ny sakafo), mekanika (ohatra manapaka taolana) sy ny fototarazo (ohatra ny Down syndrome). Ny fananana aretina mitambatra dia noho ny fifanenjanana iraisana. Tsy azo ampiasaina ny fepetra satria fandotoana toy ny ampianarina antsika tsy marina. Ny fepetra dia somary manimba satria mety hiteraka ady ary noho izany aretina izany. Ireo izay manam-pahefana dia maniry ny hino fa ny areti-mifindra sy ny aretina dia avy any ivelany ary manana rafi-kery fanefitra misy anao isika mba hialana amin'ny mpandoto. Io dia mamela azy ireo hanome vahaolana ivelany. Ny vaksiny izay tian'izy ireo hampifangaro ny maha-olona amin'ny fahakingan-tsaina.
12 May 2020 amin'ny 11: 08
Ilay boky natao taloha ve sa taorian'ny fahita teknolojia CRISPR no hita? Satria mamela antsika hijery akaiky kokoa ny haavon'ny ADN sy RNA.
12 May 2020 amin'ny 11: 43
Navoaka tamin'ny 2010 ny boky Soul Causes of Diseases.
Nahita ny lalànan'ny natiora ny Dr Hamer tamin'ny faran'ny taona 70.
Manontany tena aho raha toa ka ilaina izany rehefa hita ny teknolojia CRISPR araka ny loharanom-baovao ofisialy. Saika ny fampahalalana rehetra dia nohamarinina. Angamba io teknika io dia efa nisy taloha kokoa noho ny lahateny ofisialy.
12 May 2020 amin'ny 13: 53
@Martin, fandinihana mahaliana indrindra momba ny RNA / luciferase. Mino aho fa tafiditra ao anatin'ny vaksiny vaovao ity. Mampalahelo fa tsy hitako ny fanadihadiana feno, mandany vola izany.
Ny fomba incPRINT (in-cell protein - RNA interaction) dia mandresy ireo fanamby ireo amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola feno habibiana an-dahatsary marika mifampitohy amin'ny RNA mahaliana amin'ny alàlan'ny MS2 (MS2CP) . Raha misy fifandraisan'ny RNA amin'ny fitsapana iray ary ny proteinina fitsapana dia refesina amin'ny alàlan'ny fahitana manaraka ny sel lysis sy ny immunoprecipitation ny proteinina notsongaina.
12 May 2020 amin'ny 16: 16
+ Jiro maitso 🤔hmmmm
Ny GreenLight Biosciences dia mitentina $ 17m hamehezana ny famokarana mRNA ho an'ny fitsapana kandidà vaksiny COVID-19
Luciferase dia anarana iray mahazatra ho an'ny kilasin'ny angovo izay matetika miteraka bioluminescence amin'ny natiora. Ny anarana dia avy amin'ny Lucifer, izay midika hoe "mpitatitra maivana". Ny ohatra malaza indrindra dia luciferase avy amin'ny Photinus pyralis glowworm. Ao amin'ny fanehoan-kevitra luminescent, ny hazavana dia vokatry ny fitrandrahana lucifine (pigment) ary adenosine triphosphate (ATP).
12 May 2020 amin'ny 18: 14
Toa novakiana niaraka tamin'i Salmon izy io.
tantely nanoratra hoe:
14 May 2020 amin'ny 20: 51
Ny boky Soul Causes of Illness dia azo alaina maimaim-poana ho E-boky avy amin'ny mpandika: https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
Marcel Korver nanoratra hoe:
11 May 2020 amin'ny 16: 17
Azafady mba omeo fanazavana misimisy kokoa momba ny fanambarana nataonao momba an'i Dr. Judy Mikovits, satria izy dia vavolombelona manan-danja tokoa momba ny kolikoly ao anatin'ny indostrian'ny vaksiny ary matetika miaraka amin'ireo olona manan-danja hafa toa an'i Robert F. Kennedy, Del Bigtree, Dr Andrew Wakefield sns ... izay rehetra tsy mahalala azy tantara dia tsy marina !!!!
11 May 2020 amin'ny 17: 06
Ny tsy fahafantarana an'izany fa tsy tanterany ny tantarany na fantatry ny kotroka fa tsy tena nisy ny tantara, fa manampy amin'ny famenoana ny harom-pamonoana amin'ny harato fiarovana lehibe hahafotika azy, mba hahafeno ny toby fampianarana indray. hieritreritra ny olona manomboka izao "Aza manadino izany tsikera izany dia hahafantatra bebe kokoa"
12 May 2020 amin'ny 08: 21
Avy eo dia io no tambajotra fiarovana lehibe indrindra satria niasa nandritra ny taona maro i Robert F. Kennedy ary tena nahavita asa tsara i Del Bigtree an'ny Highwire. Mazava ho azy fa afaka mametra-panontaniana ny zava-drehetra isika, fa ny vokatry ny asany toa ny Vaxxed dia ny olona an-tapitrisany no nifoha.
Raha harato fiarovana koa izany dia ity no iray lehibe indrindra.
12 May 2020 amin'ny 11: 11
Manampy anao aho mba hanantena fa tsy izany, fa andeha isika hijery.
11 May 2020 amin'ny 17: 14
Tsarovy fa tsy miteny ny fandrika harato feno fiarovana aho tsy afaka milaza ny marina. Tsy milaza koa aho fa pro-vaksiny aho. Ny lazaiko dia hoe ny paikady fiarovana tsy maintsy miorina amin'ny mahazatra dia ny 'misintona amin'ny fahamarinana', saingy misy baomba ao amin'ny ilany roa sosona.
Amin'ity horonantsary skotsa ity aho dia manazava:
12 May 2020 amin'ny 08: 22
ho hitantsika raha misy tapany roa na tsia ... aleo manantena izahay fa tsy izay
Gerke Teitsma nanoratra hoe:
11 May 2020 amin'ny 18: 10
ity vehivavy ity dia nilaza fa hampiditra ny tsimokaretina VIH. mitokana .. manaitra be izany. miahiahy koa izy ka voatery nikatona ny vavany nefa navela hiresaka izao tampoka izao.
11 May 2020 amin'ny 19: 50
Mandritra ny fotoana fohy dia tsy miahy ny zava-misy na ny marina izy ireo. Tsy zava-dehibe akory izany. Raha misy zavatra na zava-misy marina na tsia, dia natao hanavahana ny maha-izy azy avy amin'ny scam-dry zareo ihany. Ny tanjona lehibe dia avy amin'i Hen, Fifangaroana, toa ny
olo-tsotra misafotofoto, tsy mahatadidy izay zavatra tokony hinoana intsony, mampalemy ny herin'ny olo-tsotra, ireo andevo. Misy ny mararin'ny olona tsy manao na inona na inona ary tsy mazoto. Izay tadiaviny marina. Noho izany dia misimisy kokoa ho azy ireo ny fisafotofotoana satria afaka miverina amin'ny famantaranandro izy ireo avy eo averina indray sns.
Izay no antony ahitanao matetika ny ankizilahy an-dahatsoratra milaza izany, hoy ny tovolahy iray hafa ka nilaza an'io zazalahy io sns sns.
11 May 2020 amin'ny 20: 17
Mahitsy .. endrika endrika hipnose ... "aiza no tokony jereko, lasa misavoritaka ny lohako"
Izany indrindra no ahafahan'ny sainao tsy misaina.
12 May 2020 amin'ny 13: 02
Ny lohahevitra fantatrao dia ho avy, tena matanjaka.
Ny olon-drehetra dia mandositra ny zazavavy, ilay Pied Piper of Hammering izay mamaly ao anatin'ny adiny iray raha misy zavatra tsy mety amin'ny upload ataonao. (ahoana ary?)
Misy tafika iray izay hanompo anao tsara!
Anio hariva dia nametaka ny tanako eo amin'ny balcony ho any aminareo rehetra e!
W Hörchner nanoratra hoe:
12 May 2020 amin'ny 13: 24
Raha ny tenany ihany, ny lahatsoratra Forbes dia azo raisina ho propagandy ihany koa. Ny zavatra rehetra novakianao dia mila mino na matoky azy ho marina. Raha mamaky andinin-teny vitsivitsy ianao dia sarotra ny hamaritana raha voasoratra ny fahamarinana na tsia.
Ohatra, voalaza fa ho nitatitra ny tenany izy fa tsy tokony hosamborina (ao an-trano). Raha mikaroka amin'ny google ianao dia hahita vaovao mifanohitra koa.
1) https://abcnews.go.com/Health/Wellness/chronic-fatigue-researcher-jailed-controversy/story?id=15076224 nanoratra fa nanao sonia izy ny talata iray.
Ity lahatsoratra momba ny vaovao ity dia navoaka tamin'ny 2 Desambra 2011.
2) https://mynews4.com/news/local/judy-mikovits-turns-herself-in nanoratra fa nanao sonia izy tamin'ny alatsinainy.
Navoaka tamin'ny 29 Novambra 2011 ny lahatsoratra momba ny vaovao. Ny lahatsarin'ny vaovao dia nanaporofo fa navotsotra io andro io, izay tsy marina amin'ny tatitra hafa fa nitazona azy andro maromaro.
3) https://www.sciencemag.org/news/2011/11/controversial-cfs-researcher-arrested-and-jailed Sheriffs ao amin'ny Ventura County, Kalifornia, dia nisambotra an'i Mikovits omaly noho ny fiampangana henjana fa mandositra ny fahamarinana izy.
Ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Asabotsy 19 Novambra (10 andro ho an'ny lahatsoratra mynews4 ??).
Omaly aorian'izay ny zoma 18 Novambra. Mbola hafa noho ireo hafatra roa teo aloha. Tsy fantatro raha nisy fisehoan-javatra marobe toy ny fisamborana ary avy eo mitatitra izany an-tsitrapo.
Lahatsoratra ao amin'ny sciencemag.org (https://www.sciencemag.org/news/2020/05/fact-checking-judy-mikovits-controversial-virologist-attacking-anthony-fauci-viral#) ho valin'ny nolazain'i Mikovits:
Mikovits: mahery fo tao am-ponja aho, nefa tsy misy fiampangana.
Ny mpisolovava ny distrika ao amin'ny distrikan'i Washoe, Nevada, dia nametraka fitoriana momba an'i Mikovits izay niampangana azy tamin'ny fahazoana angon-drakitra solosaina sy fananana mifandraika amin'ny WPI. Nidina ny fiampangana, ampahany noho ny olana ara-dalàna nateraky ny mpampiasa azy taloha. '
Ao amin'ny andininy faha-3 dia milaza izany, ankoatra ny zavatra hafa:
'Ny mpitondra tenin'ny biraon'ny Washoe County Sheriff dia nilaza tamin'ny ScienceInsider fa tsy namoaka ny fangatahana io, na koa ny departemantan'ny polisy Reno na Sparks. Nilaza izy fa mety avy amin'ny iray amin'ireo masoivoho federaly any Washoe County. '
Toa tsy mazava daholo izany. Ankoatr'izay, avy amin'ny fomba fijeriny (ary nidina ny fiampangana taty aoriana), dia notazonina tsy nisy fiampangana izy. Tsy mieritreritra aho fa hafahafa izany toe-javatra izany. Ao amin'ny 'sarimihetsika' dia naneho ihany koa izy fa misy ifandraisany amin'ny voalaza fa halatra fananana.
Malalaka ihany koa ny milaza fa ny sarin-tsarimihetsika sy / na horonan-tsarimihetsika ekipa SWAT dia nampiasaina izay tsy misy ifandraisany amin'ny fisamborana. Mitranga izany amin'ny tsipika fivorian'ny media. Tapaka, namboarina ary noforonina amin'ny fiainana. Ary izay rehetra hitanao sy / na vakinao amin'ny haino aman-jery dia mikendry ny hanome anao fahatsapana manokana. Toy izany ihany koa ny fandaharana toy ny Zembla ary na dia ny Serivisy aza. Jereo ihany koa ny sary eo an-tampon'ny lahatsoratra Forbes. Raha tsy natao hananganana fahatsapana izany ...
Fanamarinana diso, fanotanana ... teny framing nampiasaina ho fika manoratra na miteny ny marina. Toy ny hoe 'mpikirakira tsikombakomba' dia boaty iray izay omen'ny olona iray ny fiampangana ratsy. Ny paikady rehetra.
Mino aho fa ny ankamaroan'ny saintsika dia mifototra amin'ny finoana, faharesen-dahatra sy fahatokisana. Zava-misy iray ho an'ny iray, tsy maintsy mihevi-tena ho iray ny iray hafa. Ary inona ny hevitry ny tsikombakomba ho an'ny olona iray dia zava-misy ho an'ny hafa. Inona ny fahendren'ny olona iray ka adala ny olon-kafa?
17 May 2020 amin'ny 05: 07
12 May 2020 amin'ny 15: 54
vaovao vaovao matanjaka sasany, tsara vintana i Greta dia niverina tamin'ny KUCH😷 indray
12 May 2020 amin'ny 19: 06
Eto dia fanamafisana ny ampahany lehibe nantsoin'i Martin nandritra ny taona maro. Ary ny fanamafisana tsara indrindra dia amin'ny faran'ny farany, maharitra 19 minitra ilay sarimihetsika, fa ny 3 minitra farany dia natao ho an'ny mpamaky rehetra ary miara-miasa ny fanjakana IMBers hoy ny tenany, manohitra izay heverinao fa misy ankehitriny. Eny, eny koa amin'ny fianakavianao. Indray andro dia lasa tsy zatra an'ny tompo anao ianao. Ary avy eo mahatsapa ny fiainana tahaka ny an'ny olon-drehetra ianao. Angamba ity lehilahy ity dia hanome anao fanazavana kely. Na dia mety tsy ho izany, satria voafetra ao amin'ny tranonkalanao ianao. Martin dia iray amin'ireo vitsy an'ady miady ho an'ny tena fahafahana ianao. Misaotra anao amin'ny ezaka rehetra nataonao. Na dia mbola mihevitra ny mahery fo ho an'ny tompony aza ny IMBers. Tapitra ny zava-drehetra.
17 May 2020 amin'ny 04: 59
« Fanafihana mahery vaika tao amin'ny tranokala Martin Vrijland, fa hitohy isika!
Fotoana hanaovana ny fiovana lehibe sy famerenana lehibe: sonia ny fitakiana »
Total fitsidihana: 2.427.420
Zonnetje op I Maurice de Hond dia mahita ilay valiny tsy misy dikany (video) iray metatra sy sasany
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op I Maurice de Hond dia mahita ilay valiny tsy misy dikany (video) iray metatra sy sasany